[၁၅၆ ကြိမ်မြောက် Toda 530 (သုညစွန့်ပစ်ပစ္စည်း) လေ့ကျင့်ခန်း] ၅၃၀ (သုညသုည) လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်ခန်းကိုမတ်လ ၁ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့နံနက် ၈ နာရီမှစတင်သည်။ မြို့ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းဖြင့်မြစ်နှင့်ပင်လယ်ထဲသို့စီးဝင်သောအမှိုက်ပမာဏကိုလျှော့ချပြီးအဏ္ဏဝါညစ်ညမ်းမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ ငါတတ်နိုင်သမျှများစွာသောလူများ၏တက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချင်ပါတယ်။ သင်၏ဒေသရှိမြို့ကောင်စီတစ်ခုစီနှင့်နေထိုင်သူများအသင်းအဖွဲ့များအတွက်ကွဲပြားသောကြောင့်ရပ်ကွက်ကောင်စီဥက္ကperson္ဌသို့မဟုတ်ဒေသခံကောင်စီဥက္ကwith္ဌနှင့်အရင်မေးမြန်းပါ။ ...
၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၀၆:၄၈
[ခေတ်သစ်တာ ၀ န်ပေးအပ်သောဟောပြောပွဲအတွက်သတင်းအချက်အလက်] ၎င်းသည်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးပညာသင်ကြားရေးဌာနမှနိုင်ငံသားများ၏ခွင့်ပြုချက်ပေးသည့်ဟောပြောပွဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ငွေကြေးနှင့်အီလက်ထရောနစ်ငွေကြေး” စသည့်“ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့်သင်တန်းများကျင်းပပါမည်။ သငျသညျကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်အပိုစွမ်းရည်အနည်းငယ်ရှိသကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ကို join! [ဖော်ပြချက်] အီလက်ထရောနစ်ငွေနှင့် virtual ငွေကြေးကဲ့သို့သောဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးသည်သတင်းအချက်အလက်လူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါ ၀ င်သောသုတေသီများ၏ရပ်တည်ချက်၊ ဥပမာငွေစက္ကူနှင့်ဒင်္ဂါးများနှင့်မည်သို့အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို အခြေခံ၍ စတင်မည်။ ...
၁၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၀၂:၂၂
[တတိယအကြိမ် Toda City ၏ကလေးများစာဖတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ် (မူကြမ်း)] မြို့တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကလေးများစာဖတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုမြှင့်တင်ရန်တတိယ Toda City ကလေးစာဖတ်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲပါမည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်ငံသားများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တင်ပြသည်။ စုဆောင်းမှုကာလ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁ (Sat) -March 1 (Sun) 1F 1A 80A ဦး စီးဌာန - တစ်သက်တာသင်ယူရေးဌာနစာကြည့်တိုက် (ပြင်ပလိုင်း ၄၄၂-၂၈၀၂) ...
၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၀ ၀၇:၅၃
[Ara Four Salon ကို Niizoku Kita မူလတန်းကျောင်းမိဘနှင့်ကလေးဆက်သွယ်ရေးရင်ပြင်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ] ၎င်းသည်မျိုးဆက်တစ်ခု၏ဖခင်များနှင့်မိခင်များသည်သူတို့၏ခံစားချက်များကိုဝေမျှရင်းစကားပြောခြင်း၊ လန်းဆန်းစေခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည့်အလှပြင်ဆိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ပါဝင်မှုကိုမျှော်လင့်! ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ (ကြာသပတေးနေ့) 2nd 10: 00-11: 00am Nisokita မူလတန်းကျောင်းကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအခန်း ရည်မှန်းချက် / စွမ်းဆောင်နိုင်မှု - အသက် ၃၈ နှစ်အောက်ကလေးများနှင့်လက်ရှိအသက် ၀ မှစ၍ ၃ နှစ်ကြားကလေးများ အဖေနဲ့အမေ ၁၅ ယောက် ...
[အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားများအနေဖြင့် Ashihara မူလတန်းကျောင်းရှိရာသက်ပန်လေ့လာရေးကျောင်းတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်ယာယီကိုယ်ပိုင်လေ့လာမှုအခန်းဖွင့်ခြင်း] ဖွင့်လှစ်သောနေ့ရက်များ - ဖေဖော်ဝါရီ ၈ (Sat)၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၉ (နေ)၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၉ ရက် (Sat), မတ် ၁ ရက် (နေ) ၁F80A အချိန် - နံနက် ၉း၀၀ နာရီမှညနေ ၆း၀၀ ၁F80A နေရာ - Ashihara မူလတန်းကျောင်းတစ်သက်တာသင်ယူခြင်းသင်တန်းပထမထပ်ညီလာခံအခန်း ၁F80A ရည်မှန်းချက် - အငယ်တန်းအထက်တန်းကျောင်းသားများနေထိုင်ပြီးမြို့တော်တွင်နေထိုင်ကြသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ကျောင်းသားမှတ်စုစာအုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမည်) စွမ်းရည် - ၃၀ (လူတစ် ဦး လျှင်လစ်လပ်နေရာတစ်နေရာရနိုင်သည်) ...